कुशल लगानीकर्ता फिलिप फिसरले यसरी दिएका छन् आम लगानीकर्तालाई ‘गुरु मन्त्र’ – OnlinePahar
कुशल लगानीकर्ता फिलिप फिसरले यसरी दिएका छन् आम लगानीकर्तालाई ‘गुरु मन्त्र’
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:५९ Basanta Khanal	0 Comments	share market
काठमाडौं : फिलिप ए. फिसर (१९०७–२००४) लाई एक कुशल लगानीकर्ता तथा लेखकका रुपमा चिनिने गरिएको छ । फिसरद्वारा लिखित ‘कमन स्टक एन्ड अनकमन प्रोफिट नामक पुस्तक सन् १९५८ मा प्रकाशन भएको थियो । यो पुस्तक आजसम्म पनि उत्तिकै चर्चित र लोकप्रिय रहेको छ । विख्यात लगानीकर्ता वारेन बफेट पनि फिसरबाट प्रभावित थिए । फिसरले सन् १९३१ मा ‘फिसर एन्ड कम्पनी नामक इन्भेष्टमेन्ट फर्म पनि स्थापना गरेका थिए । फिलिप फिसरलाई आधारभूत विश्लषणका आधारमा कम्पनीको वृद्धि सम्भावना पहिचान गरी लगानी गर्ने पहिलो दीर्घकालीन लगानीकर्ताको रुपमा समेत चिन्ने गरिएको छ । फिलिपको यो लगानी रणनीतिले वारेन बफेटलाई पनि प्रभावित बनाएको थियो । फिलिपका पुत्र केन फिसरले पनि आफ्ना पिताको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने ‘फिसर इन्भेष्टमेन्ट्स सञ्चालन गरिरहेका छन् । केनले उक्त कम्पनी सन् १९७९ मा स्थापना गरेका थिए । आधुनिक लगानी सिद्धान्तको क्षेत्रमा फिलिप फिसरले महत्वपूर्ण प्रभाव छोडेका छन् । आधारभूत विश्लेषण (फन्डामेन्टल एनालिसिस) प्रयोग गरी वृद्धि सम्भावनाका आधारमा सेयरको विश्लेषण सुरु गर्ने श्रेय फिलिपलाई दिइएको छ । फिलिप आफू पनि उच्च गुणस्तर तथा भविष्यमा निकै वृद्धि सम्भावना बोकेका सेयरहरुमा मात्र लगानी गर्न रुचि राख्ने गरेका थिए ।
फिसरको लगानी सिद्धान्त सतहिरुपमा हेर्ने हो भने निकै सामान्य देखिन्छ । त्यो हो : आफ्नो बुझाई भित्र रहेका राम्रो वृद्धि सम्भावना बोकेका कम्पनीहरुको केन्द्रीकृत पोर्टफोलियो खरिद गर्ने र त्यसलाई दीघकालीनरुपमा होल्ड गर्ने । तसर्थ फिसरलाई कसैले सेयर बिक्री गर्ने उचित समय कहिले हो भन्ने प्रश्न गर्यो भने उनको जवाफ हुन्थ्यो कहिले पनि होइन’ । उनले किनेको सबैभन्दा चर्चित सेयर हो मोटोरोला कम्पनी । उनले सन् १९५० मा सेयर खरिद गरेको मोटोरोलाको सेयर आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि होल्ड नै गरिरहेका थिए । लगानीकर्ताले जहिले पनि उच्च वृद्धि क्षमता भएका उच्च प्रोफिट मार्जिन भएका र उच्च पुँजीगत लाभ दिने कम्पनी तथा त्यस्ता क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने फिसरले सुझाव दिएका छन् । यसका साथै अनुसन्धान र विकासमा जोड दिने उच्च बिक्री क्षमता र आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सक्ने कम्पनीमा मात्र लगानी गर्नु उचित हने उनको सुझाव रहेको छ । फिसरलाई आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिका रुपमा पनि चिनिने गरिएको छ । कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गर्नुअघि फिसर व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा उक्त कम्पनीको बिजनेसका बारेमा सकेसम्म धेरै जानकारी लिने गर्दथे । नेटवर्किङका आधारमा कम्पनी तथा व्यापारका बारेमा जानकारी राख्ने तरिका फिसरका लागि निकै प्रभावकारी रहेको थियो ।
सानो बजार पुँजीकरण भएका ग्रोथ स्टकमा फिसरको बढी विश्वास
फिसरले ग्रोथ स्टकलाई पनि ठूला र साना कम्पनीमा वर्गीकरण गरेका थिए । ठोस वृद्धि सम्भावना बोकेका र वित्तीयरुपमा सबल कम्पनीहरुलाई ठूला कम्पनी भनेर फिसरले वर्गीकरण गरेका थिए । उनको समयमा आइबीएम डाओ केमिकल लगायत कम्पनीहरु ठूला कम्पनीमा गनिन्थे । यी कम्पनीहरुले सन् १९४६ देखि १९५६ बीचको १० वर्ष अवधिमा ५ गुणा बढी प्रतिफल दिएका थिए ।
ठूला कम्पनीले दिएको उक्त प्रतिफल लोभ लाग्दो भए पनि फिसरलाई भने साना र भर्खर सुरुवात भएका कम्पनीले दिने उच्च प्रतिफलमा रुचि हुने गरेको थियो । फिसरका अनुसार साना र सुरुवाती चरणमा रहेका कम्पनीहरुबाट अझ बढी लाभ पाउने सम्भावना सबैभन्दा उच्च रहन्छ । कहिलेकाहिँ यस्तो लाभ एक दशकमा हजारौं गुणा बढीसम्म पनि हुन सक्ने पनि फिसरले बताएका छन् । तसर्थ उच्च वृद्धि क्षमता भएका साना तथा युवा कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने फिसरको विश्वास रहेको थियो ।कमन स्टक एन्ड अनकमन प्रोफिट’ फिलिप ए. फिसरले लेखेको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पुस्तक हो । यस पुस्तकको पहिलो प्रकाशन सन् १९५८ मा भएको थियो । तर प्रकाशनको आधा शताब्दी बितिसक्दा पनि यो पुस्तक उत्तिकै चर्चित छ । फिसरको रुचि जहिले पनि उच्च गुणस्तरका ग्रोथ स्टकहरु खरिद गर्ने र त्यसलाई वर्षौं वा दशकौंसम्म होल्ड गरी कम्पाउण्डिङबाट पुँजीगत लाभ लिने रहेको थियो । अहिले प्रख्यात लगानीकर्ता वारेन बफेटको लगानी तरिकालाई पनि कतिपयले बेन्जामिन ग्राहम र फिसरको मिश्रणका रुपमा लिने गरेका छन् । ‘कमन स्टक एन्ड अनकमन प्रोफिट मा पनि फिसरले उच्च गुणस्तरका सेयर खोज्ने आफ्नो सिद्धान्तको सार प्रस्तुत गरेका छन् । यस पुस्तकमा नेटवर्किङका आधारमा कम्पनी वा बिजनेसको बारेमा जानकारी लिने विषयमा पनि चर्चा गरिएको छ । जसमा कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुअघि उक्त कम्पनीको ग्राहक कर्मचारी सेयरहोल्डर तथा सरोकारवाला सबैसँग विस्तृत अन्तवार्ता लिने र कम्पनी सम्भावनाका बारेमा जानकारी लिने काम समावेश हुन्छ । यस्तै फिसरले पुस्तकमा कमन स्टकमा हेर्नुपर्ने १५ मुख्य पक्षहरुका बारेमा पनि बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यी बुँदाहरु कम्पनीको गुणात्मक विश्लेषणका लागि निकै प्रभावकारी मानिएका छन् । साथै कस्ता सेयरहरु खरिद गर्ने कुन् समयमा खरिद तथा बिक्री गर्ने भन्ने बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ । पुस्तकमा बजारलाई निरीक्षण गर्ने र लगानी सिद्धान्त विकास गर्ने विषयवस्तुहरु पनि समावेश गरिएको छ ।
← आज सीइडीबी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँड ! कसरी हेर्ने नतिजा ?
भारतमा रुसी भ्याक्सिनको मूल्य भारु ९९५.५०, नेपालमा मूल्य कति ? →
१० कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा नेप्से २,६०० माथि, यि कम्पनीको मूल्य बढ्न बाँकी नै छः अध्यक्ष रौनियार
२८ माघ २०७७, बुधबार ११:३५ Basanta Khanal	0